Final Cut Pro X bụ ike na vasatail usoro. Ma gịnị n'ezie na-enye ya nku bụ narị otu narị na otu narị otu narị nke 3rd ọzọ nkwụnye ins ị nwere ike ngwa ngwa tinye ka usoro ihe omume.
Depụtara niile nke mmetụta nhọrọ ga-ruo mgbe ebighị ebi; nnọọ ime a Google search maka "FCP X Plugins" na ị ga-ahụ ihe m pụtara. Otú ọ dị, ebe a bụ iri ụlọ ọrụ ndị na-eme ka n'ezie mma mmetụta, ngwaọrụ, ikwu n'ụzọ na izugbe visual weirdness i kwesịrị ịtụle na-agbakwụnye na gị onwe gị na Final Cut usoro. Ha mbio na price, ma onye ọ bụla na-emepụta mmetụta na ị dị nnọọ nwere ike inwe ihe ọ bụla ọzọ ụzọ.
A usoro nke free nkwụnye ins na ike mmetụta, n'ozuzu weirdness ma ọ bụ na-edozi nsogbu. Alex Golner e-emepe emepe plugins maka Final Cut ebe banyere version 1.0.
Mụta ihe banyere Alex 4D >>
Ahịa: € 9,95
Nke a bụ definitive ngwaọrụ maka ijikwa ọba akwụkwọ, mgbasa ozi, na-aza faịlụ na Final Cut Pro X. Lee ihe na mgbasa ozi na-echekwara ebe na ngwa ngwa ihichapụ faịlụ ị na-adịkwaghị mkpa. Nke a bụ ihe dị ka oké mkpa a ịba uru dị ka ị ga-ahụ maka Final Cut.
Mụta ihe banyere Arctic whiteness >>
# 3. juru ebe nile Design Ngwaọrụ
Ahịa: $ 59 - $ 349, dabere ngwugwu
A n'ọbá akwụkwọ nke visual mmetụta ọcha na ị ịdọrọ-na-dobe kpọmkwem jidesie gị FCP X usoro iheomume ike a nso nke mmetụta. Ndị a gụnyere: ọkụ, anwụrụ ọkụ, uzuzu, snow, mattes, ikwu n'ụzọ na ọtụtụ ndị ọzọ. Na mkpebi ruo 4K.
Mụta ihe banyere juru ebe nile Design Ngwaọrụ >>
Ahịa: $ 39 - $ 349, dabere ngwugwu
A ọtụtụ nke Motion na Final Cut Pro X ndebiri, visual mmetụta, utu aha na logos. Nnukwu iche iche, pụtara imewe, nza na nza nke nhọrọ.
Mụta ihe banyere Motion VFX >>
Ahịa: Free Starter kit, plugins mbio free ọtụtụ narị dollar
FxFactory na-enye ihe mmetụta engine nke ụlọ ọrụ ndị ọzọ iji ike pụrụ iche utịp sitere na site mfe utu aha na ikwu n'ụzọ na-visual emeso na-agaghị ekwe na-akọwa na okwu. Ozugbo i nwere FX Factory arụnyere, ị nwere ike ịhọrọ site ọtụtụ narị plugins na-agba ọsọ na ya. Plus, ọ na-enye interface na-eme ka hapụụrụ nza nke nkwụnye ins mfe.
Mụta ihe banyere FxFactory >>
Ahịa: $129.95 maka mmetụta bundles, $ 299 maka Titler Pro 3
NewBlueFX malitere na Windows, na banyere afọ abụọ gara aga, kwagara Mac na-akwado ma Adobe Premiere na Apple Final Cut Pro. Ha na-ere mgbanwe na mmetụta bundles nke ịrụzi footage, nakwa dị ka tinye utu aha, ikwu n'ụzọ na visual mmetụta. Ma REAL kpakpando nke ha show bụ ihe ịtụnanya titling ngwugwu akpọ Titler Pro 3.
Mụta ihe banyere NewBlueFX >>
Ahịa: $ 39 - $ 99, dabere n'elu ngwugwu
Ụbọchị Final Cut Pro X mbụ tọhapụrụ, Crumplepop nzọ na-akpa anụ ụlọ na-amalite na-emepe emepe mmetụta nanị maka Final Cut. Nraranye kwụrụ anya na a ọgaranya dịgasị iche iche nke agba ngwaọrụ, GoPro Fisheye Fixers, gbawara n'etiti ihuenyo na ndị ọzọ na mmetụta. E nwere nza na nza nke goodies ịhọrọ site na.
Mụta ihe banyere Crumplepop >>
Ahịa: Ahịa mbio free ruo ọtụtụ narị dollar, dabere n'elu ngwugwu
Red Giant Software bụ ihe ọzọ na venerable alụmdi na mmetụta ụlọ ọrụ. Ha ụlọ ọrụ na-eduga Trapcode, Colorista, na Primatte keyers isetịpụ ụkpụrụ na ụlọ ọrụ. Nso nso a, ha kere "Universe", nke-enye gị ohere iji nweta a akụ na ụba nke mmetụta, n'ihi na dị nnọọ ezi uche ego kwa ọnwa. Ahịa: Ahịa mbio free ruo ọtụtụ narị dollar, dabere n'elu ngwugwu.
Mụta ihe banyere Red Giant Software >>
Ahịa: Malite na $9.99, dabere ngwugwu
Ọ bụla mkparịta ụka banyere plugins maka Final Cut agụnye otu mgbe Intelligent Assistance. Ha na-enye ngwaọrụ na aka na-egbu osisi footage, ha na mmepụta akụkọ, na converting oru ngo n'etiti nsụgharị. Ọ bụghị onye ọ bụla kwesịrị a ngwaọrụ, ma mgbe ị na-eme, ọ dịghị ihe ka mma.
Mụta ihe banyere Intelligent Assistance >>
Ahịa: $ 695 na free ikpe
BorisFX bụ Switzerland-Army-Knife nke visual mmetụta. Ọtụtụ narị mmetụta, ngwaọrụ, ikwu n'ụzọ, utu aha nile na otu ngwugwu: Boris Continuum Complete v9. Mmetụta ọ na ngwugwu a mkpa ka a hụrụ na-kweere. Pụtara mmetụta, ngwaọrụ na-eme ka a na-achọghị ọcha na etiti akwụsị, keyers, masks, na ndị ọzọ anya-swiiti karịa a ngagharingosi.
Mụta ihe banyere Boris FX >>
E nwere nnọọ ọtụtụ ihe ndị ọzọ sịrị ahụ nwere ike kwuru, ọ fọrọ nke nta yiri ihere ka na-akwụsị iri. Ma ihe nile nke ụlọ ọrụ ndị ka ndị magburu onwe ngwaahịa na nwere ike inye gị oru ngo a pụrụ iche anya. Ọzọkwa, ọtụtụ n'ime ha na-enye free ọnwụnwa, otú i nwere ike nnwale na ha na gị onwe gị na-ahụ ndị nke i nwere ike na-enweghị.
M na mgbe ụtọ nkwụnye ins. N'ihi na ihe ha na-eme bụ na-ndabere ngwaọrụ n'ime Final Cut na ịgbatị na ụzọ na dị nnọọ boggle ndị pụrụ ichetụ n'echiche. Na-adọrọ onye nkiri pụrụ ichetụ n'echiche bụ ihe mgbaru ọsọ nke ọ bụla nchịkọta akụkọ.
> Resource> FCP> 10 Jụụ Plugins maka Final Cut Pro X